KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Kooxda Al shabab oo laga saarayo Gedo
Friday 3 January 2014 15:07
Garbahaaray (KON)—Maamulka Ahlu Sunna ee Gobolka Gedo, ayaa sheegay in ay Wadaan abaabul Duulaan Kooxda Al shabab looga saarayo Guud ahaan Gobolka.
Afhayeenka Ahlu Sunna, Sheekh Maxamed Xuseen (Al Qaadi), ayaa waxa uu u sheegay Saxaafadda Maanta in ay Diyaariyeen Cutubyo Ciidamo ah, oo loo dhamaystiray Agabkooda Ciidan, waxaana uu intaasi ku daray in dhowaan ay qaadayaan Weerar ka dhan ah Al shabab.
Wuxuu sheegay in Al shabab sanadkan 2014 ay ka saarayaan Deegaanada fara ku tiriska ah ee ay hadda ka joogaan Gobolka Gedo, Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dhinaca kale, Afhayeenka waxa uu DFS iyo Shacabka ugu baaqay in loo midoobo Xureynta Kooxda Al shabab dhamaan Dalka Soomaaliya.
Hadalkan, ayaa waxa uu imaanaya iyadoo Gobolada Bay, Bakool iyo Gedo ay dhowaan Dhaq Dhaqaaq military ay ka bilaabeen Ciidamada Itoobiya,kuwaasi oo la sheegayo in wadaan Howlgal weyn oo Al shabab looga saarayo Goboladaasi.
Dowlada ayaa sidoo kale sheegtay in Horaanta sanadkan ay Al shabab Dalka ka sifeynaysao.Ahlu Sunna waxa ay Xulafo la tahay DFS iyo Ciidanka Itoobita ee ku sugan dalka.